ကျောက်ခေတ်ဆီက ပေးပို့လိုက်တဲ့စာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
History » ကျောက်ခေတ်ဆီက ပေးပို့လိုက်တဲ့စာ	4
Posted by Thint Aye Yeik on Sep 8, 2016 in History, My Dear Diary, Poetry |4comments
အခုတလော လက်ညှိုးတွေ ခေတ်စားနေတယ် ကြားလို့. . .တဲ့။
ဇာတ်တော်သမိုင်းထဲက ဟိုလူကြီးတောင်မှ ဓါးသွေးနေပြီ။
လက်ညှိုးတွေကလည်း ဖြတ်မယ့်ဓါးကိုတောင် ထိုးကာထိုးကာနဲ့ ဟားတိုက်ရယ်မလို့တဲ့. . .
လှောင်ပြောင်ရယ်သွမ်းနည်း တစ်သန်းမကကိုလည်း ပြုစုနေကြလေရဲ့။
ခြေထောက်တွေကပဲ မှန်ရှေ့ဆီမှာ ရပ်ဖို့ရာ မသွားရဲတာလား?
အဲ့ဒီလိုနဲ့. . .
ဒီပုစ္ဆာရဲ့အဖြေဟာ . . .
လေပြေတွေ ရှဲခနဲ ပြေးထွက် ပျောက်ကွယ်…
မုန်တိုင်းတွေသာ ရှူးရှူးရှဲရှဲ ဝင်လာတယ်။
”ကိုယ်ဟာ မုန်တိုင်းဆန်စွာ ကြမ်းရှဆူပွက်နေပြီ ဆိုတာကိုတော့. . .
ဘယ်မုန်တိုင်းကမှ . . .
ကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့ (ကျောက်ခေတ် ပြန်ရောက်သွားသလို)မြို့တော်ထဲကနေ. . .
ခပ်မြန်မြန်လေး ပြေးထွက်ရင်း. . .
၂၀၁၆၊ စက်တင်ဘာလ ၈ရက်
kai says: ကြောက်စရာ့ ကျောက်ခေတ်မြို့တော်ကနေ..
ကျောမမွဲလူသားရဲ့ … ခတ်ကြောကြောစကား..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12186
Thint Aye Yeik says: .ကျောက်ခေတ်ဆီကို ပြန်ပို့တဲ့စာကြီး
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: ဘုမသိဘမသိနဲ့ဖတ်သွားပါဂျောင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
မမချွိ says: နာတော့ ကျောက်ခေတ်လို့ ကြားရင် တင်းပုတ်နဲ့ ထုချင်စိတ်ပဲ ပေါ်လာတယ်။